🥇 ▷ Shaashadda jabtay ee iPhone 5s waxaa lagu beddeli karaa dukaanka Apple ✅
Shaashadda jabtay ee iPhone 5s waxaa lagu beddeli karaa dukaanka Apple
Apple waxay bilaabi doontaa barnaamijka badalashada shaashadda ee iPhone 5s
Maalmaha soo socda Apple wuxuu bilaabi karaa barnaamij cusub oo dayactir ah, kiiskan waxay la xiriirtaa bedelka shaashadda jaban ee iPhone 5. Isbedelka shaashadda waxaa si toos ah loogu sameyn doonaa goobihiisa rasmiga ah ee iibka, oo lagu qalabeeyay adeegga dayactirka caanka ee Genius Bar.
Barnaamijka badalashada shaashadda ee loo yaqaan ‘iPhone 5s screen desktop’ ayaa ka bilaaban doona Mareykanka
Marka loo eego waxa la soo sheegay, Laga bilaabo bisha soo socota ee Ogosto 4, Apple waxay bilaabeysaa bedelida ama badalida shaashadda iPhone 5s ee jabtay, calanka hada ee shirkadda Californian, ugu yaraan Mareykanka.
Warbixinta ayaa lagu yiri:
Bakhaarada ‘Genius Bar’ ee dukaanka Apple Store ayaa laga yaabaa inay bilaabaan helitaanka tiro badan oo shaashado ah barnaamijka dayactirka ee iPhone 5s. Adeeggu waa inuu ubaahnaadaa dadweynaha 4ta Ogosto. Waqtigan xaadirka ah waa la heli karaa, bilowga, qaar ka mid ah xarumaha rasmiga ah ee Mareykanka ee marxaladda tijaabada.
Sida aan ognahay, dayactirka shaashadda jaban ee iPhone 5s kuma dhacayo barnaamijka dammaanadda ee Apple ee loogu talagalay iPhone, iPod taabashada iyo iPad, sidaa darteed isticmaaleygu wuxuu mas’uul ka noqon doonaa bixinta lacagta dayactirka noocan ah, oo leh Qiimaha qiyaastii waa qiyaastii € 150 qiyaastii.
Apple waxay badali doontaa shaashaddii jabtay ee iPhone 5s iyada oo loo sii marinayo Genius Bar
Ilaa iyo hada lama oga hadii ay daruuri noqon doonto in loo hogaansamo shuruud kasta oo awood u yeelan karto in shaashadda wax laga beddelo, in kasta oo la dayactirayo oo ka baxsan damaanad qaadista ma jiro wax dhibaato ah, waxaan si fudud u qasbanaan lahayn Weydiiso ballan ka samaynta shirkadda Genius Bar oo aad adeegga dayactirka ee Apple si aad u beddesho shaashadda jabtay ee iPhone 5s.
Dabcan, Barnaamijkan wuxuu ku jiraa marxalad tijaabo oo dhameystiran qaar ka mid ah Apple ee Mareykanka iyo sida ay guusha u tahay, Barnaamijkan waxaa lagu fidin doonaa Mareykanka oo dhan waxaanan u qaadaneynaa in muddada dhexdhexaadka ah ay gaari doonto dalalka intiisa kale taas oo dukaamada rasmiga ah ee shirkadda Californian laga heli karo, oo ay ku jiraan Apple Store ee Spain.